Izindaba - Uyini Umsebenzi Wesiphathi Sezicubu?
Uyini Umsebenzi Wesiphathi Sezicubu?
Isiphathi sezicubu siwalungele amakhaya, amahhotela, izindlu zangasese, izindlu zangasese, izindawo zomphakathi, izindawo zokuzijabulisa nezinye izindawo ezizimele nezomphakathi.
Isiphathi sezicubu esiqondile yisiphathi sezicubu esisetshenziswa kakhulu.Isiphathi sezicubu esiqondile sivumela isibambi sezicubu ukuthi sibekwe ezindaweni ezahlukahlukene ngaphandle kwesidingo sokufakwa odongeni, okwandisa ububanzi bokusetshenziswa kwaso.
Ngasikhathi sinye, kulula futhi kuyashesha ukufaka umnikazi wezicubu.Kulula futhi kuhlanzekile.
Isiphathi sezicubu sigwema ukungcolisa izicubu ezinokungcola ezandleni lapho upheka noma wenza eminye imisebenzi, okuletha lula nenhlanzeko kubantu.
I-Dogguan Shengrui Metal Crafts Co., Ltd.is ingumkhiqizi onguchwepheshe futhi othumela izinto emazweni angaphandle ngokukhethekile ekwakhiweni nasekukhiqizweni kwezinhlobo ezahlukahlukene zesiphanyeko sezindondo zezemidlalo nensimbi yezemidlalo i-hook. izinsimbi zobucwebe bensimbi njll.
Ngenxa yemikhiqizo yethu esezingeni eliphakeme kanye nokuhlinzekwa kwamakhasimende okuvelele, besisebenza namakhasimende avela emazweni angaphezu kwama-20.Uma unentshisekelo kunoma yimiphi imikhiqizo yethu noma ungathanda ukuxoxa nge-oda langokwezifiso, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi. Sibheke phambili ekwakheni ubudlelwano bebhizinisi obuyimpumelelo namakhasimende emhlabeni jikelele.
Isiphathi sezicubu yinto esondelene kangako.Nakuba isiphathi sezicubu yinto encane kakhulu, kodwa sithinta ukuhlobisa komndeni. Ukusetshenziswa okukhulu kwesiphathi sezicubu ukuletha lula kubantu. Manje akusikho emakhaya kuphela, kusezindaweni zomphakathi.
Kulezi zinsuku, isiphathi sezicubu yinto ebaluleke kakhulu empilweni yethu yansuku zonke. Ngakho-ke, kunemikhiqizo eminingi kakhulu abaphathi bezicubu emakethe, ngabe uyazi umsebenzi othize wesiphathi sezicubu?